İntek Kalıp ve İskele Wuxuu Noqday Wada-shaqeeyaha Xalka ee Mashruuca Tareenka ee Tansaaniya | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAFRIKA255 Tansaaniyaİntek Kalıp ve İskele Wuxuu Noqday Wada-shaqeeyaha Xalka ee Mashruuca Tareenka ee Tansaaniya
18 / 02 / 2020 255 Tansaaniya, AFRIKA, DUNIDA, tareenka, Tareenka dhakhso ah
Shaqada intek iyo pier waxay noqdeen xalka mashruuca tareenka ee Tanzania
İntek Kalıp ve İskele wuxuu noqday xalka wada-shaqeynta Darüsselam - Morogoro iyo Morogoro - Dodoma - Makutupora Railway project ee Tansaaniya, oo ah khadka tareenka ugu xawaare sarreeya ee Bariga Afrika.
Mashruuca Darussalam - Morogoro iyo Morogoro - Dodoma - Makutupora Railway project, oo ahmiyad weyn u leh marka la eego ahaanshaha magaalada dekedaha ah ee Dar es Salaam, kaliya kuma biirin doonto ganacsiga iyo dalxiiska Tansaaniya laakiin sidoo kale Uganda, Rwanda, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo iyo Tansaaniya. waxay kuxiran doontaa Bariga Afrika Badweynta Hindiya. Sidan, waxay awood u siineysaa waddamada Afrika ee aan lahayn xeeb inay u dhoofiyaan Kheyraadkooda hodanka ah ee dhulka hoostiisa ku yaal.
Ujeeddada laga leeyahay mashruucu waa in lagu xidho magaalooyinka Dar es Salaam - Mwanza midba midka kale iyada oo loo marayo halbeega SGR (Standard Gauge Railway), halkaas oo masaafada u dhaxaysa labada tareenka lagu aqbalo heerarka adduunka ay tahay 1435 mm. Markii xariiqan la dhammeeyo, waxay noqon doontaa 1219 km. Xilligan, khad jira oo leh heerkii hore ee MGR iyo furitaanka tareenka 1000 mm ayaa la istcimaalay, oo khadka cusub waxaa loo dhisay isbarbar dhig khaladkii hore ee jiray. Isgoysyada jidadka, naqshado gaar ah ayaa laga sameeyay labadaba xariijinta barakaca iyo daraasadaha mashruuca caaryada si looga hortago taraafikada tareenka qadka hore inta lagu gudajiro dhismaha cusub.
Dawladda Tansaaniya ayaa maal-galin doonta inta u dhexeysa Daarusalaam - Makutupora marxaladda koowaad, Makutupora - Mwanza ayaa mar dambe loo furi doonaa qandaraas.
Dhamaan kaabayaasha wadooyinka tareenka, oo ay kujiraan koronto iyo saxeexida, waxaa gacanta ku haya Yapı Merkezi, oo ay kujirto naqshadeynta qadka Darsesselam - Makutupora, oo dhererkeedu dhan yahay 541 km. Yapı Merkezi wuxuu kahelay dhamaan qaab dhismeedka iyo baahiyaha daboolan ee mashruuca ee İntek Kalıp ve İskele.
Qeybta Darussalam - Qeybta Morogoro waxaa loo yaqaan Lot 1, qeybta Morogoro - Dodoma - Makutupora waxaa loo yaqaanaa Lot 2. Dhererka Lot 1 qaybtiisu waa 205 km, dhererka Lot 2 qaybtiisuna waa 336 km. Baaxadda mashruuca tareenka oo leh xawaaraha naqshadeynta ah 160 km / saac, 154 gogo 'oo buundooyinka dhererkoodu yahay 4.651 m, 4 gogo' dherer 2.622 m, 42 gogo '591 m isgoysyo dherer ah, 68 xabbo oo ka mid ah 1.701 m marinnada dheer iyo xad-dhaafyada, 1100 gogo' 31.800 m cuverts, 14 Waxaa jira laba saldhig iyo 2 aqoon isweydaarsi dayactir.
Khadku wuxuu sidoo kale dhaafi doonaa caasimadda cusub, Dodoma, wuxuuna isku xiri doonaa Dar es Salaam iyo Makutupora. Qeybtan, oo bixin doonta garsoor aamin ah oo la isku halleyn karo oo u dhexeeya Dodoma iyo Daarusalaam, ayaa sidoo kale xoojin doonta aragtida ah in Dodoma laga dhigo magaalo casri ah.
DHAQAALAHA ISTICMAALKA IYO NABADGELYADA NABADGELYADA LAGU SAMEEYO mashruuca
Qaab dhismeedka farshaxan ee mashruucu wuxuu ku fidaa dhul ballaaran oo waxay leeyihiin kala duwanaansho qaab dhismeed oo ay keeneen juqraafi. Sababtaas awgeed, iyadoo la go'aaminayo saamiga caaryada in la siiyo, nidaamyada caaryada ee kala duwan ee bixin doona faa iidada ugu badan marka loo eego goobta adeegsiga ayaa la xushay codsiyada duulimaadkuna si guul leh ayey u socdaan. Nidaamka qaab-dhismeedka daahyada alwaax alwaax ee INTEVA waxaa loo isticmaalay qaab-dhismeedka aasaaska iyo inta badan caarada dhoobada daahyada, iyo habka PANEMAX ee birta ballaaran ee qaabka qaab dhismeedka qaab dhismeedka loo adeegsaday goobihii joomatari ee dhismayaasha isku beddeleen oo loo baahan yahay hagaajinta dhererka. Nidaamka xamuulka HD 150 ee xaraashka ah ayaa loo adeegsaday sidii qaab-dhismeedka sagxadda ee ku yaal laambadaha madaxa iyo qaab-dhismeedka shaashadda. Wadada dhex marta bartamaha magaalada, marinka taraafikada lama joojineyn gobolka loo qorsheeyay, furitaanka ballaaran ee loo baahan yahay in la gaaro waxaa lagu gaadhay iyada oo la adeegsanayo nidaamka MULTİTEK.
Marka laga reebo nidaamyada caadiga ah, nidaamyada shaqada ee gaarka ah ayaa sidoo kale loogu shaqeeyey mashruuca guud. Kuwa ugu muhiimsan ayaa ah daah-ka-joojinta la hakiyey, oo ay dhiseyso Xarunta Dhismaha si ay ugu daadiso sagxadda la taaban karo ee la xoojiyey ee biriijka birta. NPU 200 profiles ayaa lagu hagaajiyay buundada birta waxaana qaabeynta qaab dhismeedka sagxadda iyadoo la tixgelinayo kala sooca birta ee biriijka. Xargaha dhismaha biraha ee gaarka loo leeyahay waxaa naqshadeeyay INTEK qaybaha u dhexeeya xargaha birta ah ee is-weydaarsiga laga sameeyay dhulka iyo qaybta geeska leh ee labada dhinac ee guluubka madaxa. Aagaggaas, oo lagu talinayo in laga dhigo sidii alwaax alwaaxyo ah oo duulimaadyo ah oo loogu talagalay dalabaadka caadiga ah, naqshad gaar ah ayaa loo sameeyay oo si guul leh loogu hirgaliyay duurka sababta oo ah alaabada adag ee Tansaaniya.
Qaab-dhismeedka İntek iyo Xaddiga-goosadka ee loo Adeegsaday Mashruuca:
Qaabdhismeedka Xarvert iyo Xayawaannada Xayawaanka: HD 150: A = 3240 m2 - H = 360 - 890 cm - t = 65 - 125 cm
Qaabka Madaxa Beat Floor: HD 150: A = 255 m2 - H = 450 - 620 cm) 12 gog
Qaab-dhismeedka Dabaqa Msimbazi Viaduct Floor: HD 150 - MULTİTEK: A = 1460 m2 - H = 722 - 888 cm - t = 30-180-210-360
Biriijka bir bir birdeysan ee shaqada laga joojiyey: A = 1078 m2 - t = 20-38,3 cm
Wadada daahfuran ee daahfurka xoolaha iyo xayawaanka PANEMAX: 1120 m2 - H = 360 - 690 cm
Shaxda qaab dhismeedka daahyada INTEVA: A = 753 m2 - H = 300 cm
Foomka Shaashadda Cagta Cagta ee INTEVA: A = 950 m2 - H = 400 - 510 - 658 - 858 cm
Mu'asasada Edge lug Foundation INTEVA: A = 287.5 m2 - H = 190 - 250 cm
Casharka Safka Dhexe ee Shaqada SCS: 8 xirmooyin
Msimbazi Viaduct Foomka Shaqada INTEVA: A = 266 m2 - H = 132 cm
HABKA GUDAHA HOOSE: A = 5300 m2 - H = 1400 cm
Stair Tower HD 150: 5 wuxuu dhigayaa H = 750 - 2000 cm
Magaca Mashruuca: Dar es Salaam - Morogoro - Dodoma - Wadada Tareenka Makutupora
Maal-gashade: Shirkad Tareenka Waddooyinka Tansaaniya
Qandaraaslaha ugu weyn: Yapı Merkezi
Nidaamyada loo adeegsaday: HD 150 - MULTİTEK - İNTEVA - PANEMAX - İNTESAFE
Medel waa lammaanaha xalka deegaanka ee shabakadaha biriijka biriijka
Wada-shaqeeyahaaga Xalintaada ee Ganacsiga Albania Mersin Frigo
Dhismaha Xarunta Dhexe ee 1.9 ayaa qandaraas tareen oo kaliya ka socota Tansaaniya
Rayhaber, Railİal iyo RaillyNews nidaamka tareenka ee Globaltransportforum…
Xal u helista Gaadiidka Baaskiilka
Xalka rasmiga ah ee wadada 3 ee degmada taariikhiga ah